Quirky Converge famerenana base marobe | Vaovao IPhone
Ao an-trano dia manana iPhone 5 sy 4S, iPad 3 ary iPad Mini izahay. Na dia mahavariana aza ny fizakantenan'ny iPad, saika isan'andro dia tsy maintsy andoavanao vola izy rehetra, ka rehefa tapitra ny andro, ilaina ny mamela azy io amin'ny toerana "miala sasatra" ary mamaly amin'ny fotoana iray ihany ho ahy. Nandritra ny fotoana ela dia nampiasa base de charge aho izay mamela ny famoahana fitaovana hatramin'ny 4, saingy ny iPad 3 dia tsy nampandoa vola raha efa nisy fitaovana roa na maromaro efa namidy. Taorinan'ny fihodinana maro dia hitako ny Quirky Converge, toby famahanana fitaovana hatramin'ny 4 izay nampanantena fa handidy izay apetraka eo alohany, ary miaraka amina endrika tiako, ka tsy nisalasala be aho ary nividy azy.
Ny fotony dia vita amin'ny polycarbonate fotsy, ary tsotra be izy io. Manana fifandraisana USB 4 izy eo an-damosina izay hampifandray ireo tariby mandefitra amin'ny fitaovana rehetra. Ny fatiantoka, satria mila ny tariby ianao, saingy tombony lehibe, satria tsy manambady marika izy, afaka mandoa vola ianao, satria miankina aminao ny tariby fifandraisana. Izy io koa dia manana mari-pamantarana maivana eo aloha izay manondro fa mifandray izany.
Ny endriny «S» dia mamela amin'ny lafiny iray ny fitaovana dia tohana tanteraka, ary etsy ankilany, afaka manafina ireo tariby ao ambanin'ny fotony, mba tsy hisy zavatra hita, zavatra fototra ho antsika izay mankahala ny manana tariby eo anelanelany. Ny mpampitohy ihany no mivoaka amin'ny alàlan'ny lava-bato ao anaty fotony, rakotra fehin-kibo izay manampy ny mpampitohy hijanona "raikitra", na dia tsy araka ny itiavany azy aza ny valiny raha ny mpampitohy Lightning kely.
Ny fitaovana dia apetraka eo ambonin'ny fotony, ary mifandray amin'ny tariby, ka manomboka ny famahana. Firy ny fitaovana azo alaina? Eny, manana hatramin'ny 4 USB izy, noho izany amin'ny teôria 4 fitaovana. Amin'ny tranga 4 iPhones (na finday avo lenta) dia tsy hisy olana lehibe, fa amin'ny raharahan'ny iPad dia misy iPad Mini iray sy retina iPad iray farafaharatsiny, tsy misy hafa. Ny vahaolana noraisiko dia ny fanesorana ny iray amin'ireo tariby eo amin'ny sisiny ary entao ny iPad 3 (lehibe indrindra ananako) eo ambonin'ilay talantalana nametrahako ny fotony, ka mamela toerana ho an'ireo iPhone roa sy iPad aho mameno Mini.
Ny fitaovana 4 rehetra dia miakatra tsy misy olana na kely aza. na ny iPad 3 izay marefo indrindra amin'ny charger aza, ary tsy hitako fa lava ny fotoana fandefasana. Ny base dia ampifandraisina amin'ny alàlan'ny charger mahazatra amin'ny arus elektrika, saingy ny antsipiriany ratsy dia niaraka tamin'ny fifandraisana amerikana, ka tsy maintsy nandany 2 euro tamin'ny adaptatera iray ho an'ny plug-n'ny eropeana aho. Ao amin'ny tranonkala ofisialy, izay nanaovako ny fividianana, tsy nomen'izy ireo safidy aho hangataka fifandraisana eropeana.
Una vahaolana tonga lafatra ho an'ireo manana fitaovana maro ary izy ireo koa dia maniry ny hametraka azy ireo tsara rehefa tsy ampiasaina. Manana izany amin'ny tranokala ofisialiny ianao (www.quirky.com) amin'ny $ 52,98 (eo amin'ny 40 euro) ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana. Efa hitako koa io tamin'ny UK Amazon, saingy lafo lavitra kokoa, 47,07 pounds (eo amin'ny 50 euro) ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana.
Fanazavana fanampiny - Ny iPad Mini sy iPad Retina dia manana ny bateria manana fahaleovan-tena bebe kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Famerenana ny base multi-load Quirky Converge
Toa tsara ilay base 😛 ny ratsy, ny vidiny, andao jerena raha azonao omena ahy eh, hahahaha: ')
Tsy ratsy ny vidiny, ny zavatra ratsy dia ny vidin'ny fandefasana. Ankoatr'izay, ny fananana USB dia manome antoka fa haharitra mandrakizay izy io.
Ho an'ny taonako (13 taona) raha tena ratsy dia tsy manana filokana mafy aho, hahaha ny zavatra rehetra novidiako dia aloan'ny raiko, ary amin'ny farany dia halefany any amin'ny helo aho miaraka amin'izay laniko tamin'ity volana ity …. mihoatra ny 450 euro 😛
1) iPad mini - 329
2) Rafitra fanamafisam-peo iPhone 4S - 69'99
3) headset Bluetooth - 36'99
4) Tranga maromaro ho an'ny iPhone 😛 - 15 (avy amin'ny sinoa izy ireo, hehehe)
Jose Manuel Marqueta Sanchez dia hoy izy:
Tsy inona izany fa ny fanohanana voalamina tsara izay nanampian'izy ireo ny charger manerantany, ary nametraka vidiny adala ...
Alao antoka ihany koa fa ny fitaovana elektronika entin'ity charger ity dia tsy mitandrina ny batery toy ny charger serial an'ny iPhone na iPad.
Valiny tamin'i Jose Manuel Marqueta Sanchez
ahoana no hividiananao ??
Amin'ny tranokala ofisialiny sy amin'ny Amazon UK http://www.amazon.co.uk/Quirky-Converge-Rest-Charge-Gadgets/dp/B00603S1SY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1358372235&sr=8-3
Fampiharana cycloramic izay manodina ny iPhone miaraka amina vibration ary mirakitra horonantsary 360º
OPlayer, mpilalao horonantsary feno ho an'ny iPhone